Chishanu, July 24, 2015 Chishanu, July 24, 2015 Douglas Karr
Isu takasheedzera zvakakwana nezve zvinoonekwa zvemukati? Handifungi kudaro. Isu tatove takagovana akati wandei infographics pane inoonekwa nyaya yekutaura uye mashandisiro emhando dzakasiyana dzemhando dzinoonekwa zvemukati dzinoenderera dzichishanda. Ini ndanga ndichitsanangura maitiro aya kumutengesi wemuno svondo rino uye ivo vaive chaizvo vaine nguva yakaoma yekutenda kukanganisa kwekuti zuva nezuva zvinoonekwa zvemukati zvakagovaniswa online zvinogona kubatsira bhizinesi ravo. Ndichiri ipapo, ndakatora gumi
Svondo, July 5, 2015 Douglas Karr
Handina chokwadi chekuti uchawana hurukuro yakanyatsonaka yezvakanakira uye mazano kumashure kwekushandisa Slideshare kushambadzira kweB2B kupfuura Iyo A-to-Z Nhungamiro kuSlideShare kubva kuFeldman Creative. Iko kusanganiswa kwechinyorwa chakazara uye pazasi infographic zvinonakidza. SlideShare inotarisira vashandisi vebhizinesi. SlideShare traffic inotungamirwa zvakanyanya nekutsvaga uye nemagariro. Vanopfuura makumi manomwe muzana vanouya kuburikidza nekutsvaga kwakananga. Traffic kubva kune varidzi vebhizinesi iri 70X yakakura kupfuura Facebook. Traffic ndeyechokwadi pasi rese. Kupfuurisa